Home Wararka Rooble oo ku fashilmay inuu iska fogeeyo dib-u-dhaca doorashada & Qaar kamida...
Rooble oo ku fashilmay inuu iska fogeeyo dib-u-dhaca doorashada & Qaar kamida B. Caalamka oo diiday la kulankiisa
RW Rooble ayaa doraad codsi uu u diray xubnaha Beesha Caalamka ee wakiilka uga ah Soomaaliya, waxa ku codsaday inuu doonayo in uu kulan wadajira la qaato beesha Caalamka si uu warbixin uga siiyo geedi socodka doorashooyinka dalka.
Codsiga la kulanka in uu la kulmo beesha Caalamka ayaa waxa uu ahaa mid uu uga hortagaayey eedaha ugaga imaan kara haddii ay doorashada dhaafto bisha Maarso 15keeda.
Sida MOL loo xaqiijiyay, waxa codsigiisa si dhib leh uga soo jaawaby oo keliya Safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Soomaaliya. Safiir Larry ayaa isagana doonayay in uu kaarka marsado RW Rooble si uu kulankaas uu fariin ugu diro Madaxda Dowlada Goboleedyada.
Sida ay sheegayaan xogag lagu kalsoon yahay, Rooble ayaa kamida siyaasiyiinta ku jira liiska laga mamnuucay inay u safraan dalka Mareykanka. Waxa jira cadeeymo ay heyaan beesha caalamka inuu dhaqaale ku qaatay qabashada doorashada reer Somaliland iyo tan beesha reer Banaadiraga. Cadeemahaaas ayaa isugu jira muqaal iyo maqal.
Hadaba isaga oo xogtaa hayo ayuu isku dayay in uu iska fogeeyo eedaha muujinaya inuu isaga diyaar u yahay in ay doorashada dhaafin waqtigii loo asteeyay oo ahayd 15ka Maarso.
Rooble ayaa ku mashquulsan in maalmaha soo socda uu la kulmo qaar kamida safiirada Soomaaliya si uu isugu sawiro ama uu isaga beri yeelo eedanta ah in uu qayb ka yahay fashilka ku yimid doorashada xiligeeda dhaaftay.
Dhanka kale kulankii shalay ee Safiirka Maraykanka waxaa looga hadlay qodobo badan oo ay ku jiraan: 1) doorashada lagu qabanaayo Garbahaareey iyo qaabka gudiga loo geyn lahaa halkaas, 2) waxa uu sheegtay inuu dib u heshiis ka dhax-wado beelaha dega Gedo, 3) Waxa kaloo uu sheegay in uu doonayo in lagu qasbi reer Gedo inay aqbalaan in Garbahaarey kuraas looga danbeeyo Jubbaland State iyo Ra’iisul Wasaaraha, 4) waxa uu eedayn u jeediyay Farmaajo iyo beeshiisa.
Safiirka Maraykanka ayaa dhankiisa uga digay Rooble in uu sii adkeeyo xaalada Gedo ka jirto, waxaana loo sheegay in aan kuraasta Garbahaareey taala aan marnaba loo rarin karin magaalo kale. Waxaa kaloo si wadjira looga horyimid aragtida ah in dib loo dhigo kuraasta Garbahaarey. Waxaa loo sheegay inay lama huraan tahay in ay shacabka Gedo ay qeyb ka noqdaan doorasahda dalka ka dhaceyso.
Rooble oo isku muujinaya inuu yhay qofka kaliya ee rabo in ay doorasho waqtigeeda ku dhacdo ayaa ku eedyay madaxda dowlad goboleedyada oo ay ku jiraan Jubbland iyo Puntland in ay qayb ka yihiin fashilka ku yimid doorashada inay waqtigeeda ku dhacdo. Waxa uu sidoo kale uu eedyay Midowga Musharaxiinta oo uu sheegay in ayan dhaqaale heysan sidaas darteedna ayan doonaynin in doorasho xligeeda ku dhacdo.
Ugu danbeeyntii Rooble ayaa ka sheegay shirka in uu doonayo in beesha Caalamka ay Villa Soomaaliya ku qasbaan inay isaga la shaqeeyso. Isaga oo ka codsaday safiirka Mareykank ain Farmaajo culays lagu saafo in uu fududeeyo qabashada doorashada Jubbaland.
Previous articleXog: R/W Rooble iyo Axmed Madoobe oo go’aan ka gaaray kuraasta Garbahaarey
Next articleAl Caddaala oo hambalyo hordhac u diray Odowaa
Xaalada nolosha shacabka Muqdisho & Hagardaamada MW. Farmaajo.
Ciidanka Ammaanka Galmudug Oo Gacanta Ku Dhigay Qarax Iyo Qofkii Watay